Vokany : 1980 ha ho difotry ny rano - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Barazy ao Ankaterena-Sahanivotry
Mandeha hatrany ny tetikasan’ny Filoha na projet présidentiel na dia efa hifarana aza ny fitondran’ny Filoha Rajaonarimampianina. Isan’ny tetikasan’ny Filoha ny fananganana barazy maro toy ny ao Sahanivotry. Ho 2000 ha latsaka kely ny velaran-tany ho difotry ny rano raha tanterahina io projet présidentiel ao Sahanivotry io. Manoloana izany dia miantso vonjy ny vahoaka. Nandre ny Fiangonana ary mamaly ny antso amin’ny alalan’ny JEP sy ny Caritas. Araho.
Izao tazany maso eto amin’ny sary izao (misy ny renirano ary misy ireo olona manao diabe sy ireo mipetraka eo Ankaterana) dia ho difotry ny rano avokoa.
Raha ny tarehimarika efa natsidiky ny mpitondra fanjakana eny antoerana dia 53 m ny aavon’ny barazy haorina eo Ankaterena. Raha ny tombana natao ka 60 m ny aavon’ny barazy hahorina dia mahatratra 1980 ha ny velaran-tany ho difotry ny rano.
Fantaro ary fa ny kianja filalaovana baolina iray dia mirefy 7000 m², izany hoe latsaky ny 1 ha izany. Raha izay no refin’ny kianja dia kianja filalaovana baolina miisa 2000 no ho difotry ny rano raha mahatratra 60 m ny aavon’ny barazy kasaina haorina ao Ankaterena.
Tsy nisy fanazavana matotra sy mazava nomena ny vahoaka hatreto. Rariny ve raha avela hihorohoro ny Malagasy?
Ho kendana eo Ankaterena ny rano. Diabe naharitra ora iray niainga teo amin’ny fokontany Farihitsara no nataon’ny vahoaka marobe ny alakamisy 30 aogositra 2018 maraina teo no nentin’ny vahoaka hanoherana izany. Nitety havoana sy lohasaha ireo olona rehetra ireo nahitana zaza ary koa zokiolona miaro ny fananany. Solontena avy amina fokontany 5 sy kaominina 5 voakasika izy ireo. Rehefa nahazo toerana avo ny mpandeha an-tongotra dia nisy hatrany ny maneho ny sentom-pony hoe : « Izao lemaka hitan’ny masontsika izao dia ho difotry ny rano ». Tsy tany ngazana akory ilay 4 km nandehanana fa nahitana tanim-boly sy tanim-bary, trano fianarana sy fonenana ary fiangonana. Ireo rehetra ireo dia ho difotry ny rano.
« Satria tsy nomena ny dosie tekinika izahay dia sarotra ho anay tekinisianina ny hilaza mahitsy hoe etsy ka hatreroa no ho difotry ny rano » hoy i Kotondrajaona Rajoelisolo, sekretera Jeneralin’ny BIMTT na Birao Ifandraisan’ny Mpampiofana eo amin’ny Tontolon’ny Tantsaha. « Tombana miainga amin’ny zava-misy hita teny an-toerana no azo natao » hoy izy nanohy.
Mpiasa manao carottage no hita teny an-toerana. Raha hazavaina tsotsotra dia fangalana santionan-javatra any ambanin’ny tany any no antsoina hoe carottage. Mandavaka hatrany amin’ny 80 metatra izy ireo, hahafantarana ny kalitaon’ny vato any ambany tany any. Midika izany fa ho ampolo metatra maro ny haavon’ny rano hangonina eo amin’io toerana io.
Ilay toerana ve ? Eo amin’ny toerana antsoina hoe Ankaterena (jereo ny sary) no anaovan’ny mpiasan’ny Lageotec ny carottage. Araka izany anarana Ankaterena izany dia misy faritra mora ananganana barazy eo ary hanerena ny rano hihangona eo. Maka ny santionan’ny vato ihany no ataonay ka omenay ny orinasa Tozzi Green izay azonay eto. Izy ireo no mahalala na azo anaovana barazy eto na tsia.
Barazy atao inona ?
Karazany maro ny asan’ny barazy. Misy ny barazy fanondrahana tanim-boly. Ny eo Ankaterena indray dia natao hamatsy rano ny milina hamokatra herinaratra. Tsy ivalamparana eto ny amin’izay.
Voka-dratsy ateraky ny barazy
Raha ny zava-doza ateraky ny fananganana barazy eo Ankaterena dia vinavinaina ho :
- Fokontany 5 amin’ny kaominina 5 no ho difotry ny rano ary tantsaha an’aliny no ho voadona (very fananana, esorina amin’ny toerana…
- olona maro no ho very fananana satria lavitry ny fokontany voakasika no mipetraka ny tompon’ny tany ho difotry ny rano. Fa tsy ireo mipetraka eo antoerana ihany, mety ho any Antsirabe no tompon’ny tanim-bary na any Manandona.
Ny 29 marsa no nandrenesana tamin’ny fomba ofisialy avy amin’ny solontenan’ny disitrika (rafitra fanjakana) tonga teny an-toerana fa ho 53 metatra ny haavon’ny barazy. Vao nandre izany ny mponina dia niantso vonjy. Isan’ny nanohina ny antso ny Fiangonana. Ny fijoroan’ireo pretra fito ka isan’ireo i Mp Justin miandraikitra ny Fananan-tany anivon’ny Caritas diosezy Antsirabe, i Mp Julien miandraikitra ny JEP Antsirabe…) nandray anjara tamin’ny diabe ny alakamisy teo dia mitory fa mamaly antso ny Ekar. Tsy ny Ekar irery anefa fa teo koa ny talen’ny SAF Fjkm, ny katekista Flm sy ny fiangonana hafa. “Fanintelony izao izahay no tonga eto” hoy i Kotondrajaona Rajoelisolo, sekretera jeneralin’ny BIMTT. Mitombo hatrany ny isan’ny herivelona maneho ny fahavononany hiaro ny tantsaha sy ny mponina voakasika. “Fampiofanana tekinisianina sy mpampiofana ny tantsaha no antom-pijoroan’ny BIMTT kanefa raha tsy manana tany intsony ny tantsaha, moa tsy herim-po very maina ny an’ny BIMTT ? Izay no mahatonga anay hiaro ny fananan-tany ary hitolomanay miaraka amin’ny vahoaka toy ny ao Farihitsara” hoy i Kotondrajaona Rajoelisolo, manazava ny antom-pijoroan’ny BIMTT eo.
Alahelo nambara havana
Nandritra ny fandraisam-pitenenana teny Ankaterena no nandrenesana ny sentom-pon’ny olona (izay no fomba fitenin-dry zareo) eny ifotony. Santionany no ndeha hiarahana mamaky :
“Ny biby handeha ho vonoina no tsy ilazana izay hanaovana azy. Dia sanatria hampitoviana amin’izany biby izany ve izahay olombelona ireto ?” hoy ny solontenan’ny fokonolona nandray fitenenana.
“Ny famelana ny vahoaka hihorohoro tahaka izao no fototry ny olana. Hatao sa tsia ny barazy ? 5 metatra sa 50 metatra ny haavony satria tsy mitovy ny vokatr’ireo ? Efa mandeha ny fanaovana carottage ka nanao ahoana no tsy nisy fangalana ny hevitry ny vahoaka ifotony” hoy ny solontenan’ny Fiarahamonim-pirenena (Tafo Mihaavo, CPM…).
“Tsy ekena velively ny fanomezana lanja ny fotodrafitrasa tahaka izao ataon’ny projet présidentiel izao ary mampibaribary ny fanaovana tsinontsinona ny olombelona kanefa dia ny olombelona no voalohan-karena” hoy ny solontenan’ny JEP (Justice et Paix) eny antoerana.
“Ho mora esorina ireo tantsaha ireo satria ny ankamaroan’izy ireo dia tsy manana ny fanamarinana ny maha tompon’ny tany (titre, cadastre…) azy ireo. Ny fanaovana karatany faobe tety antoerana 800 isa amin’ny alalan’ny tetikasa CASEF aza dia mbola tsy vita, izany hoe ho mora sandaina ny fanesorana ny olona eto” hoy ny BIMTT.
Diabe iray ve dia ho ampy…
Tsapa ho manao bemarenina ny mpitondra fanjakana sy ny mpitantana ny orinasa Tozzi Green (izay tompon’ny tetikasa fanamboarana ny barazy ao Sahanivotry-Ankaterena). Mihevitra izy ireo fa ho vizaka ny vahoaka tsy hahatanty lazon’ady. “Ho eo anilanareo hatrany ny Fiangonana. Ho eo koa ireo fikambanan’ny Fiarahamonim-pirenena samihafa tonga teto androany” hoy ny fanentanana nataon’ny sekretera jeneralin’ny BIMTT. “Efa najoronareo eto an-toerana ny komity mpanao ankisisika sy mpanao andrimaso. Hitolona isika. Hiaraka hitolona isika satria ny Fiangonana tsy maty fa velona” hoy izy namarana ny teniny izay tsapa fa namelona ny afo ao amin’ireo vahoaka.